I-Old School Lodge Room 5 - I-Airbnb
I-Old School Lodge Room 5
U-Caitlin unokuphawula okungu-23 kwezinye izindawo.
Amakamelo ekilasi angu-4 ahlukaniswe ngamakamelo angu-8 anemibhede emikhulu engu-2 ngayinye. Ikamelo lomculo manje liyi-Master Room elihlanganisa umbhede omkhulu, ibha yekhofi, ihhovisi lomuntu siqu, kanye nomtapo wolwazi. Isivakashi sizonikezwa amashidi namathawula ombhede phakathi nokuhlala kwaso, kanye nesidlo sasekuseni njalo ekuseni lapho sihlala khona. Awufuni ukuphuthelwa ukuhlala kulesi sikole esiyingqayizivele, esiyingqayizivele!
U-Caitlin no-Caitlin bazotholakala ukubingelela isivakashi lapho sifika. Bazoba sesikoleni ngoLwesine-Saturday phakathi namahora avamile e-Cafe ' & Isitolo Sekhofi, kodwa bayashayelwa ucingo uma kuphakama noma iyiphi inkinga.